Iyo Linux Kernel 5.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi miviri yekuvandudza, iyo nyowani vhezheni yeLinux Kernel 5.4 yakaunzwa, shanduro mairi shanduko dzakasiyana dzinoratidzwa Izvi zvinosanganisira: yekuyedza exFAT mutyairi, "kukiya" modhi yekudzora midzi kupinda kune kernel, fs-chokwadi mashini yekutarisa faira kuvimbika, kugona kushandisa CIFS yemidzi yekuparadzanisa, uye zvimwe.
Iyo itsva vhezheni yakagamuchirwa 15743 chigambas, chigamba chigamba chiri 63MB (shanduko dzakakanganiswa mafaera gumi nemazana masere, mazana masere nemakumi masere neshanu nematanhatu emitsetse yekodhi yakawedzerwa, mitsara 12800 yabviswa). About 828167% yeshanduko dzese dzakapihwa muna 126149 dzakabatana nemadhiraivha emidziyo, ingangoita 46% yeshanduko inoenderana nekuvandudza iyo yakatarwa kodhi yezvivakwa zvehardware, 5.4% zvine hukama neneti network, 15% ine mafaira masisitimu uye 12% ine yemukati kernel subsystems.
Main nyowani maficha eLinux 5.4
Muchikamu chekuyedza «staging» ("Vanotyairi / kuferefeta /"), panowanikwa zvinhu zvinoda kunatsiridzwa, yakavhurika exFAT mutyairi yakagadzirwa neSamsung inowedzerwa. Pakutanga, zvaive zvisingaite kuwedzera exFAT rutsigiro kune kernel nekuda kwemvumo, asi mamiriro ezvinhu akachinja mushure mekunge Microsoft yaburitsa zvirevo zviripo paruzhinji uye ichibvumidza exFAT patent kuti ishandiswe mahara paLinux.
Mutyairi akawedzera kune kernel yakavakirwa pane Samsung kodhi yapera (vhezheni 1.2.9), iyo inoda kunatsiridzwa uye kuchinjika kune izvo zvinodiwa kugadzira kodhi yekernel.
Wakawedzera nzira yekuona kugadziriswasaka zvinotsiviwa fs-chokwadi, yakafanana ne dm-chokwadi, asi uchishanda padanho repasi refaira, kwete pane block block. Fs-chokwadi inowedzera kugona kusarudza zvakasarudzika kuongorora kutendeseka uye kuratidza mafaera ega ega anoshandiswa mukuverenga-chete maitiro.
Mutyairi mutsva "Mudziyo-Mapper dm-clone" mutyairi inosvika kuLinux kernel 5.4, iyi inokutendera kuti iwe ugadzire kopi yemuno zvichibva pane yekuverenga-chete block kifaa izvo zvinogona kunyorwa panguva yekuumbiridza maitiro.
Iyo EROFS faira sisitimu iyo yaimbove iri pa "staging" bazi rakaendeswa kumuti mukuru.
EROFS inotsigira kuchengetedza yakadzvanywa dhata, asi inotora imwe nzira yekuchengetera yakadzvanywa mabhuroko, akagadziridzwa ekuita kwepamusoro nekuita kwakasarudzika kuwana data.
Yechikamu chekuona, iyo tsanga yakagamuchira iyo »yekukiya» module, iyo yaisanganisira zvigamba zvakapihwa mukugovera, yaishandiswa kudzora mukana wemushandisi kune kernel uye kuvharira iyo UEFI Yakachengeteka Boot yekupfuura.
Pasina kushandisa kukiya, anorwisa uyo anobudirira mukuita kodhi nemidzi rombo anogona zvakare kuitisa kodhi yake padanho rekernel, semuenzaniso nekutsiva kernel nekexec kana kuverenga / kunyora ndangariro kuburikidza / dev / kmem.
Chimwe chinhu chitsva ndechekuti yakawedzerwa itsva virtiofs fileystem, iyo inogonesa kuburitsa kwakaringana kwefaira system zvikamu kubva kune Yevashingi system kune yevaenzi masystem. Iyo yevaenzi system inogona kukwira dhairekitori yakamisirwa kuendesa kunze kune inomiririra divi, izvo zvinorerutsa zvikuru sangano rekugovana mukana wekuwana madhairekitori pane chaiwo maitiro.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo Amdgpu inowedzera rutsigiro rweNavi 12/14 GPUspamwe neArcturus neRenoir APUs, kusanganisira maturusi emagetsi ekushandisa eNavi12, Renoir, uye Arcturus.
Mutungamiriri amdkfd (ye discrete GPUs senge Fiji, Tonga, Polaris) yakawedzera rutsigiro rwemakadhi anoenderana neNavi14, Navi12 uye Arcturus GPUs.
Mune mutyairi we DRM wemakadhi emifananidzo eIntel, rutsigiro rweGPU inoshandiswa mumachipisi asati aburitswa yakawedzerwa zvichibva paiyo Tiger Lake microarchitecture.
Iyo DRM (Direct Rendering Manager) subsystem uye i915 DRM mutyairi weIntel vhidhiyo subsystem yakawedzera rutsigiro rweHDCP2.2 vhidhiyo uye odhiyo zvemukati kopi yekuchengetedza tekinoroji.
Mutyairi weNouveau akavandudza kuratidza kwemavara uye akawedzera kugona kushandisa zvimwe zvivakwa (DEGAMMA / CTM / GAMMA) yeNVIDIA nv50 GPU.
Panguva yeiyo Hardware:
Wakawedzera rutsigiro rweARM SoC ASpeed ​​AST2600.
Tsigiro yechinyakare uye isingachashandisi Kendin / Micrel / Microchip SoCs, Winbond / Nuvoton W8695x90, uye Intel IOP900x / IOP33xx zvabviswa.
Kuwedzera rutsigiro rweplatifomu uye mahwendefa ARM Snapdragon 855 (SM8150), Mediatek MT7629, Allwinner V3, NXP i.MX8M Nano, Layerscape LS1046A, Amlogic SM1 (S905X3), Amlogic G12B (S922X, A311D), Rockchips Mecer Xtreme Mini S6, AOp Mini, Asen Mini, Chromebase Mini AST2600, Leez RK3399 P710.
Wakawedzera rutsigiro rwemalaptop zvichibva paSoC Snapdragon 835 / MSM8998 (Asus NovaGo TP370QL, HP Envy X2 uye Lenovo Miix 630), Snapdragon 850 / sdm850 (Lenovo Yoga C630) uye mafoni enhare akavakirwa paSnapdragon 410 / MSM8916 (Samsung Galaxy A3, A5, Longcheer L8150 / Android One 2).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Iyo Linux kernel 5.4 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo